ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: ကြားကြားသမျှ
Very coincidence, the exiled king name appeard in my mind when Gyokokes visit to China.
In 1973, soldiers fought with young guys in Meiktila city,acorporal was beaten.
He informed his commander and next day soldiers seized three cinemas and search for long hair young men and cut their hairs.
Zwe cinema did not open and soldiers blasted bombs, hundreds of civilians got injured. This division moved to another place very soon.
Peoples did not get any compensation, I still remember one of my friend sister’s leg had been splinted and she walks with limped leg her hole life.
အဲဒီလို update လေးတွေ ဆက်ရေးပါဗျို့။
ကျောင်းသားဘ၀က ဘူတာ မှာ စစ်သား တယောက်နဲ့ စကားများဘူး တယ်။ အရာရှိ တယောက်ဆင်း လာခဲ့ပြီး ကျနော် တို့ကို .... " မင်းတို့ စစ်သားတွေနဲ့ ရန်မဖြစ်နဲ့ .. စစ်သားတွေ မင်းတို့ကို သတ်ပစ်လို့ဘာမှ မဖြစ်သွား ဘူး .. ရှေ့တန်း တခေါက်လွှတ် လိုက်ရင် ပြီးသွားပြီ" တဲ့ ။
ကျနော်တို့ နိူင်ငံကြီးက တတိုင်းပြည်လုံး အမြဲ စစ်ဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားကြီး လိုဘဲဗျာ ...
မင်းခွေးချေး ပြီးရင် ကြောင်ချီး တွေဘဲ လာမှာထင်ရဲ့ ... သူတို့ပြောနေကြတာကတော့ .. ဒီ သန်းရွှေ ပြီးရင် .. ပညာ မတတ်တဲ့ အုပ်စု ကုန်ပြီ ဆိုဘဲ .. နောက် ကျန်တဲ့ လာ လတ္တံ့ လူတွေက ပညာ တတ်တွေ လို့ ဆိုလိုချင် ပုံဘဲ။ အတန်း ပညာသင်ဘူးရင် ပညာတတ်တွေ ဖြစ်သွားရောလား မသိ။
ကိုပေါ ရဲ့ ပရိဿတ်တယောက်ပါ...
“တရားစီရင်ရေး နည်းလမ်းနှစ်မျိုး” ကိစ္စကတော့ ဘယ်ကိစ္စမှာဖြစ်ဖြစ်ပါ နှစ်မျိုးဖြစ်နေတာကတော့မကောင်းဘူး။ double standard ဆိုတဲ့ကိစ္စကို လှန်နေရတာ သိပ်မလွယ်လှဘူးကိုပေါရေ။ equity, equality, fairness တို့ ဆိုတာတွေ ဘယ်တော့မှ ကျယ်ကျယ်ပြောနိုင်မလဲဘဲ မသိဘူးပေါ့။ diversity ဆိုတဲ့ကိစ္စကို တရားစီရင်ရေးနည်းလမ်းအဖြစ်များ သုံးနေကြလို့ ကတော့ “လူခင်ရင် မူပြင် လူမုန်းရင် မူသုံး၊ လူချစ်ရင်မူပစ်” ဆိုသလို အမျိုးမျိုးလုပ်နေကြလိမ့်မယ်။ တရားဥပဒေဆိူတာကတော့ လိုအမျိုး မလိုတမျိုး မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါဗျို့ ။
ကက်စီနို ဆိုတာ သာမန် စင်ကာပူနိုင်ငံသား နှင့် ပီအာများ ၊ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်ကြမ်းသမားများ အတွက် မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံတကာက ချမ်းသာတဲ့သူများကို ကစားဖို့ခရီးသွားလာရေးကိုတိုးမြှင့်ဖို.နဲ့အခွန်ကောက်ရဖို. အဓိကရည်ရွယ်တာပါ ၊ ကက်စီနို အကြောင်းရေးလိုက်တာနဲ့ပို့ စ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့ လဲလို့ မေးစရာရှိလာပါမယ် ..
ထိုအတူ ပီအာမှ စင်ကာပူနိုင်ငံသား ဆိုတာလည်း နိုင်ငံတကာမှ ချမ်းသာတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုသာ အဓိက ရည်ရွယ်တာပါ ၊ အဲဒါကို လွှဲမှားစွာတွေးပြီး ပီအာမှ စင်ကာပူနိုင်ငံသား ပြောင်းဖို့ ဖိအားပေးတယ်ထင်ပြီး ပီအာတွေ နိုင်ငံသားလျောက်ရင် ပီအာ အားလုံးဟာ နိုင်ငံသားရမယ်လို.မထင်မိပါ ၊ သူတို့ က သိပ်ပေးနေချင်ရင် ပီအာ အပြာရောင်ကဒ်ကို လ၀က မှ နိုင်ငံသား ပန်းရောင်ကဒ်နဲ. တစ်ခါတည်း လဲပေးရလောက်အောင်တော့ မလွယ်လှပါဖူး ၊ လျောက်လွှာ တင်ခိုင်းတယ်ဆိုမှတော့ လျောက်ထားသူရဲ့ စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ employment history ၊ လုပ်သက် ၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေနဲ့အခြားအကြောင်း အရာတွေကို စိစစ်ပြီးမှ နိုင်ငံသားချပေးတာပါ သူတို့ ရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ category နဲ့ မကိုက်ညီရင် လ၀က က စင်ကာပူနိုင်ငံသား ချပေးလိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ ၊
နိုင်ငံတကာက ချမ်းသာတဲ့ သူတွေမဆိုထားနဲ. ၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ချမ်းသာတဲ့ စီးပွားရှင် ပီအာတွေတောင် စင်ကာပူနိုင်ငံသား လျောက်တာ သိပ်မရှိလှပါ
ပီအာတွေကို အတင်းအကြပ် စလုံးနိုင်ငံသား ပြောင်းခိုင်းရင်လည်း အောင်မြင်မည် မဟုတ်ပါ အောက်ပါလင့်ကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါသည်
ကက်စီနိုက ၀င်ကြေးက စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀ နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံသားက ဒေါ်လာ ၉၀ ဆိုတော့ ကက်စီနိုကိုဝင်သွားရင် နိုင်တာမနိုင်တာအပထား ၀င်ကြေး ၁၀၀ ရုံးသွားပြီ ၊ စလုံးနိုင်ငံသားလျောက်ရင် နိုင်ငံသားဖြစ်တာ မဖြစ်တာအပထား တစ်ယောက်ကို လျောက်ထားကြေး ဒေါ်လာ ၉၀ နှုန်းနဲ. အရင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ၊
မြန်မာနိုင်ငံသားတော်တော်များများ စင်ကာပူနိုင်ငံသားပြောင်းကြတယ်ဆိုတာ ကြီးလေးသောအခွန်ကို မြန်မာသံရုံးသို့ မပေးချင်တာရယ် ၊ စလုံးနိုင်ငံသားဖြစ်သွားရင် အိမ်အသစ်ဝယ်လို့ ရတာရယ် ၊ ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးအတွက် အစိုးရရဲ့ subsidies နဲ့အခြားအခွင့် အရေးတွေ ကြောင့်ပါ ၊ ကျွန်တော့်အမြင်အရ စင်ကာပူနိုင်ငံသား ပြောင်းသွားတဲ့ မြန်မာတွေဟာ သူတို့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်လို့ ထင်မိပါတယ် ၊ ကိုယ်လည်းတစ်နေ့ မှာ အဲဒီ့လိုအတွေးများနဲ့လျောက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ရင် စင်ကာပူနိုင်ငံသား လျောက်မိမလားမသိဖူး ..
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ကြပါစေ .....
ပီအာ ချ ပေးတုန်းက လ၀က ရုံးရှေ. ဖြတ်သွားတဲ. ကုလားကိုတောင် ချ ပေးတဲ. အဖြစ်....
ပီအာတွေ ဘုန်းပေါ လအော ဖြစ်ကုန်လို. ရုံခါတော. မှာလား...
စ လုံး အစိုးရ ဖြစ်စေချင်တာက....လခ သောင်းကျော် တဲ. အဖြူ တွေ ပီအာ...ပီးတော. စီတီဇင်
လက်တွေ. မှာတော. ၁၀တန်း မအောင် တဲ. ကုလား..ပြည်ကြီးတယုတ်...နဲ.ရွှေ တွေ အပါ အ၀င်..ပါမစ်က နေ s pass, ပီးတော. ပီအာ နောက်ပိုင်း စီတီဇင် လုပ် ပီအေပီ ဂရန်. နဲ. အိမ်တွေ ပြစ် ၀ယ်ကြ
တော. ကျန်တဲ. ပီအာတွေ ကို လူစစ် မဲ. သဘောရှိပါတယ်
ရှေ.ရှောက် စလုံး စီးပွားရေး အခြေ အနေ သိပ် မကေါင်းတာကတော. အမှန်ဘဲ
သင်္ဘောကျင်း နဲ. ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း အခြေ အနေ အတော် ဆိုးနေပီကြားပါတယ် ။ ။
ဒီ သတင်းလွှာတော့ စောင့်ဖတ်ရတော့မှာပဲ။ :))
ဟူး...၊သား တို့ ဘ ၀ က တော့ တွေး တိုင်း မော တယ်..။ဘဘသန်း တို့ တိုင်း ပြည် မှာ ၀မ်း တ ခါး အ တွက် ရုန်း တုန်း က လဲ သွက် သွက် ကို ခါ လို့..၊စ လုံး ရောက် ပြန် တော့ လဲ ရုန်း လိုက် ရ တာ မျက် ဖြူ တောင် ဆိုက် တယ်..၊ အ ထိုင် လေး ကျ အ နာ ဂတ် လေး အေး လောက် ပီ လို့ တွေး ပြီး မယ် ကြံ သေး ၊ ခောတ် မ ကောင်း တဲ့ ကာ လ ရောက်.. အင်း။။ 2009 အ ကုန် လောက် က စာ အုပ် တ အုပ် မှာ ဖတ် ဖူး တယ် ၊ က မ္ဘာ ပေါ် မှာ နည်း ပ ညာ တွေ ကို ကာ လ ဒေ သ နဲ့ လိုက် ပြီး စီး မျော နိုင် တဲ့ နိုင် ငံ တွေ မှာ စ လုံး က NO:9 မှာ ရှိ နေ တယ် ၊ အဲ.. ဥ ပ ဒေ ချိန် ခွင် ရှာ ကို က မောက် က မ အ များ ဆုံး လုပ် တဲ့ နိုင် ငံ တွေ ထဲ မှာ လဲ ပါ နေ ပြန် ရော..။ ဘ ၀ ပေး ကံ ပေါ့ ကွယ်..။သား တို့ တွေ ကို က ကံ ဆိုး တာ ပါ ..၊ သား တို့ ထက် စာ နာ စ ရာ ကောင်း တာ က ထိုင်း နိုင် ငံ က မြန် မာ ရွှေ့ ပြောင်း လုပ် သား တွေ ပါ..၊ ကျ နော် တို့ က မှ အ တတ် ပ ညာ တ ခု ကို သာ သေ သေ ချာ ချာ ဖတ် တွယ် ထား ၊ ကံ မ ကောင်း လို့ ပီ အာ ပြုတ် ရင် တောင် WP လောက် တော့ ကျန် နေ ခဲ့ ဦး မှာ ပါ..၊ (ထင် တာ ပဲ လေ ဟီး ဟီး )။ ကျုပ် တော့ oversea မှာ နေ တဲ့ ကာ လ တ လျောက် တ ခု ခု အ ဆင် မ ပြေ တိုင်း "ဒင်း ကြောင့် ကွာ..၊ ဒင်း ကြောင့် " ဆို ပြီး ဟို လူ ကြီး မျက် နှာ ကြီး ကို မြင် မြင် နေ တတ် တာ တော် တော် ဆိုး တယ်..၊ ရုတ် ဆွ အ ဆုံး မြန် မာ ပြည် ကို ဖုန်း ခေါ် လို့ မ ရင် တောင် " တောက်...!! ဒင်း ကြောင့်..၊ ဒင်း ကြောင့် " လို့ ပဲ အော် နေ မိ တယ်..၊ တ ခါ က များ ဖုန်း ကတ် တ ခု ကို သုံး ပြီး လွင့် ပစ် မယ် လုပ် တော့ စက် ရုံ က တ ရုတ် တ ယောက် က ငါ့ ပေး စမ်း ပါ ဆို လို့ ပေး လိုက် တယ်..၊ ( အ လွန် ဆုံး ကျန် မှ ၂၀ ဆင့် လောက် ပေါ့ ) အံ မာ အဲ့ ကောင် က အဲ့ လက် ကျန် ကို သုံး ပြီး ဆက် တာ များ လျှာ တောင် လေ ဖြတ် မ တတ် ပဲ..၊ (အဲ့ ဒါ လဲ ဒင်း ကြောင့် ပဲ )။ ဖုန်း ကိ စ္စ လေး တောင် မှ ဒီ လောက် heat တွေ များ နေ ရင် ပဲခူး က ရင် ကွဲ ပတ် လတ် မိ သား စု ဆို ဘယ် လို များ နေ ပါ့..။
ကိုပေါပို့်စ်ကိုလဲ သဘောကျတယ်။ အပေါ်က ကိုမောရစ်ရဲ့
ကွန့်မန့်ကိုလဲ ကြိုက်တယ်။ စလုံးမှာလဲ ခေတ်မကောင်းတော့ ဘယ်ပြေးရမယ်မသိဘူး ...
(ကိုပေါရေ ကျုပ်တို့ ဘ၀ က 'ကတော့'(funnel)ကြီးထဲမှာ
ရောက်နေသလိုပါပဲ၊အစကတော့ကျယ်ပြီး တဖြေးဖြေး ကျဉ်းလာတာ၊သေခါမှ လွတ်တော့မယ်နဲ့တူရဲ့..)
အချိန်လေးရမယ်ဆိုရင် တခြားဆောင်းပါးတွေ ရေးနေတာရပ်ထားပါဦး။ ဒီမိုယောကျားတွေ အခြောက်စိတ်ဝင်နေတဲ့ ကိစ္စကို ဆုံးမဖို့ ဆောင်းပါးလေးတွေရေးပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ သူတို့က အွန်လိုင်းမှာတောင် စစ်သားတွေကို ချေးထွက်မတတ် ကြောက်နေကြတယ်။ ဒေါက်တာလွမ်းဆွေ ဘလော့ဆိုရင် တစ်နေ့ကို လူတစ်သောင်းဝန်းကျင်အထိ ဖတ်ရှုပါတယ်။ ပဲခူးလူသတ်တဲ့ကိစ္စကို စစ်ဗိုလ်တွေက ဒေါက်တာလွမ်းဆွေဘလော့ရဲ့ ကော်မန့်မှာ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကို ထောက်ခံနေပါတယ်။ ဒီမိုယောကျား ၃ ယောက်လောက်ကပဲ စစ်ဗိုလ်တွေကို ယှဉ်ပြီးပြောရဲပါတယ်။ တစ်သောင်းမှာ ၃ ယောက်ကပဲ စစ်ဗိုလ်တွေကို ယှဉ်ပြီးပြောရဲတဲ့သူပဲ ရှိတဲ့အဖြစ်ဟာ ခင်ဗျားတို့ ဒီမိုတွေအပေါ် အထင်သေးစရာဖြစ်နေပါတယ်။ပိတောက်မြေနဲ့ ကျေးစေတမန် ဘလော့မှာလည်း ဒီမိုယောကျားတွေ အသံမထွက်ရဲပါဘူး။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အမှန်တရားအတွက် နည်းနည်းပါးပါးလေးတောင် မပြောဆိုရဲဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အပြင်မှာ သေနတ်ကိုင်ထားသူတွေကို ရင်ဆိုင်ရဲမှာလဲ? ဒါ့ကြောင့်.. စစ်သားတွေရဲ့ကွယ်ရာမှာ နအဖကို ဒေါသထွက်နေတဲ့ ဒီမိုယောကျားတွေကို … အွန်လိုင်းမှာ စစ်သားတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပြီးပြောဖို့တိုက်တွန်းပေးပါဗျာ။ စစ်သားအဆဲခံရမှာကြောက်လို့ဆိုပြီး ဘာမှ မပြောတာဆိုရင်တော့ ဒင်းတို့ကို သနတ်ခါးလေးလူး… ထမိန်လေးဝတ်ပြီးနေဖို့ပြောပေးပါဗျာ။
ပီအာတိုးမပေးတော့ စီပီအက်ဖ် ပြန်ရတာပေါ့ဗျာ
ပီအာရ်က တိုးပေးကြပါတယ်။ ၅ နှစ်ရတယ်။
Ko Paw.....decades ago or so SG gov offered selectively its citizenships to Prs who were gov or gov subsidized colleges' professionals. If they did not wish to switch to ,they could decline its offer. It could offer three or four times and the employees felt under pressure because they could not go back home ,nor could they establish in other better countries. But they were never threatened the Pr statas be revoked. They eventually took up the citizenship as they felt very uncomfortable declining its offer again and again.